ထုတ်လုပ်သူများလမ်းညွှန် - B2B Marketplace - ပေးသွင်းသူများ၏အချက်အလက်များ
ဤတွင်မှာ Alietc ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖန်တီးရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည် B2B စျေးကွက် ဒါကအတူတူတတ်၏ ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း နှင့် ဝယ်လက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများတည်ဆောက်ရန်ကူညီခြင်း။
အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက် ထုတ်လုပ်သူ အချို့သောအချက်များသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များပါ ၀ င်သည့်တစ်စုံတစ်ရာသောအချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အခြားသူများကမူသင်ဝယ်ယူရန်အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများနှင့်သင်မည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ သင်၏ Alietc တွင်သင်၏အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအသုံး ၀ င်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုစုပြီးဖြစ်သည် ထုတ်လုပ်သူရဲ့လမ်းညွှန် သင်ကြိုးစားသောအခါလုပ်သောဘုံအမှားများစွာကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားကူညီရန် ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချပါ.
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကတိက ၀ တ်ပြုခြင်းသည်အချိန်ဇယားအတိုင်းလက်တွေ့ကျခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်ဆက်ဆံရေးသည်တစ်ခုတည်းကိုသာတည်ဆောက်ထားပြီး၎င်းသည်ယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်အသစ်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသည်သင်၏အဓိကပန်းတိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာယုံကြည်မှုဖြင့်သစ္စာရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သတ်မှတ်ထားသောနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ယခင်ကပင်အမြဲတမ်းပေးပို့ခဲ့ပါကဝယ်သူတစ် ဦး သည်အလားတူထုတ်ကုန်ကို ၁၀% နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းသူတစ် ဦး အတွက်အဘယ်ကြောင့်အခြားနေရာတွင်သွားမည်နည်း။
သင်၏ ၀ ယ်သူသည်သင့်အားသင်ထုတ်ကုန် (များ) နမူနာကိုတောင်းကောင်းတောင်းလိမ့်မည် ပြုလုပ်။ သင်ပို့လိုက်သောနမူနာများသည်သင်၏အရည်အသွေးကောင်းကိုမှန်ကန်ပြီးထင်ဟပ်ပြသရန်ရည်ရွယ်သည် ကုန်ပစ္စည်းများ။ ၀ ယ်သူထံသင်ပို့လိုက်သည့်ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းသည်တူညီသောသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသင့်ပြီးအချို့သောပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ အချို့နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်စေ၊ ပိုမိုဆိုးဝါးသောအရည်အသွေးရှိသင့်သည်။ သင်သေချာစေရန်မည်သည့်အမိန့်ကိုမပို့မီတင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်သင့်သည် ဝယ်ခြမ်းသူ သူတို့အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါတိုင်ကြားချက်အတွက်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ သင်သည်အရည်အသွေး၊ အချိန်နှင့်အမျှပေးအပ်လျှင်၊ ဘာကြောင့်လဲ ဝယ်ခြမ်းသူ တခြားနေရာကိုကြည့်လား အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူခြင်းထက်ဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် ပို၍ စျေးသက်သာသည်။
ဆက်သွယ်ရေးသည်မည်သည့်စီးပွားရေးဆက်သွယ်မှုတွင်မဆိုအရေးပါသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါသင်၏ဝယ်သူ၏ဖိနပ်ထဲတွင်နေရာချခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ မကြာခဏဝယ်လက်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများမိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာခြားပြီးတည်ရှိသည်နိုင်ပါတယ်, နှင့်အမိန့်ကိုဖန်ဆင်းသို့မဟုတ်နမူနာတောင်းခံသောအခါ, ထိုနောက်မှ, ထိုကာလ၌, ဝယ်သူအဘို့စုစုပေါင်းတိတ်ဆိတ်ထက်ပိုဆိုးဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ (လူကိုယ်တိုင်ထိတွေ့မှုကိုအမြဲကြိုဆိုသည်) ဖြစ်စေအီးမေးလ်များဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ သင်၏ ၀ ယ်သူကသူတို့အမှာစာနှင့်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသေချာအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်း (များ) ရောက်ရှိပြီးသည်နှင့်သင် ၀ ယ်သူနှင့်၎င်းတို့ဆက်သွယ်မှုကို ၁၀၀% စိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန်ဆက်သွယ်လိုဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်အားသူတို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုအဆင့်ကိုအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ကြောင်းသင်သိစေပြီးမည်သည့်ပြoutနာကိုမဆိုဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ်အနာဂတ်အမှာစာများအားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ယခင်ကပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်းဖောက်သည်တစ် ဦး ထက် ပို၍ ထိန်းသိမ်းထားပါ တ ဦး တည်းဆည်းပူး.
ဤတွင် Alietc တွင်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့် ၀ ယ်သူများအတွက်တုံ့ပြန်ချက်စနစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။ visitors ည့်သည်များအားသူတို့နှင့်ဆက်ဆံနေသည့်စီးပွားရေး / လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသားသောထင်မြင်ချက်များကိုစွန့်ခွာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ဤထင်မြင်ချက်သည်သင်ဝယ်သူဖြစ်စေရောင်းသူဖြစ်စေအရေးကြီးသည်၊ သင်၏ဂုဏ်သိက္ခာပိုကောင်းလာသည်နှင့်အမျှ ပို၍ စိတ်လိုကိုယ်လျောက်လူများသည်သင်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်လိုကြသည်။
သင်နှင့်ဆက်ဆံနေသောလူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သင်၏ဂုဏ်သတင်းကိုကာကွယ်ရန်အမြဲတမ်းရည်ရွယ်သင့်ပြီး၎င်းတို့နှင့်စီးပွားရေးလုပ်သည့်အခါတိုင်း၎င်းတို့ကိုသင့်အားတောက်ပနေသော5* ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသင့်သည်။ သူတို့ကိုရဖို့လည်းလွယ်တယ် EA $$$$$$$$$$$ Y ကို alietc.com မှဝင်ငွေတိုးရန်
သင်၏ကုန်ပစ္စည်း (များ) ကို Alietc တွင်စာရင်းလုပ်ခြင်း
သင်ရောင်းရန်ရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုရှင်းလင်းစွာနှင့်တိကျစွာဖော်ပြရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ၀ ယ်သူများမှဆွဲဆောင်နိုင်မည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်သတိရပါ။
ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပေးပို့သည့်ရက်စွဲများကိုမမှန်မကန်ဖော်ပြပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ ၀ ယ်သူအားစိတ်ပျက်စေရုံသာမကအခြားနေရာများတွင်စီးပွားရေးလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းကိုလည်းမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏတိုင်ကြားမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိပါက၎င်းတို့ကို Alietc အရောင်းပလက်ဖောင်းအားဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောပုံရိပ်နှင့်ဘာမျှမတူပါ။ သင်ရောင်းလိုသောထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပုံများစွာကိုသင်ထည့်သွင်းနိုင်သောစာရင်းရွေးချယ်မှုအောက်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံများဖြင့်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောပုံများအတွက်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကို Alietc တွင်မည်သို့ရောင်းချရမည်ကိုရွေးချယ်ခြင်း
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်မြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းများသင့်တွင်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အပြိုင်အဆိုင်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်နေပါကသင်၏စျေးနှုန်းကိုထုတ်ဖေါ်ချင်မည်မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်အမြောက်အများ / ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောအမှာစာများအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်အထူးလျှော့စျေးများကိုသင်ကမ်းလှမ်းချင်မှရလိမ့်မည်။ သင်သည်ဘဏ္youာရေးအခြေအနေကိုလျှို့ဝှက်ထားလိုပါက“ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအတွက်ဆက်သွယ်ပါ” ဟုသာရိုးရှင်းစွာထည့်ပါ။ စျေးကွက်အင်အားနှင့်ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်ပေါ် မူတည်၍ စျေးနှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
တနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုကမ်းလှမ်းမှုတောင်းခံခြင်းအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းသော်လည်းစျေးနှုန်းမပေးနိုင်ပါ (စျေးနှုန်းလမ်းညွှန်သည်အသုံးဝင်နိုင်သည်) ။ လူများအားသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုဈေးနှုန်းတင်ရန်ခေါ်ယူခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းမှုကိုသင်ဖွင့်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်စျေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သည်ဟုသင်စာရင်းသွင်းထားသောထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် ၀ ယ်သူသည်တိကျသောထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးသင်ကထုတ်လုပ်သည်ကိုတွေ့မြင်ပါကသင့်အားစျေးနှုန်းတောင်းခံမှုကိုသင့်အားပေးပို့လိမ့်မည်။
သင့်အသင်း ၀ င်အဆင့်ကိုရွေးချယ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်း ၀ င်အဆင့်သုံးဆင့်ကိုဖန်တီးထားပြီးတစ်ခုမှာသင့်ကိုအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏အသင်း ၀ င်ရွေးချယ်မှုသည်စီးပွားရေးပမာဏနှင့် Alietc ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်ရောင်းချင်သောထုတ်ကုန်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်။ သင်စစ်မှန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ရန်နှင့်သင်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်များသည်စစ်မှန်ကြောင်းသေချာစေရန် Alietc ပလက်ဖောင်း၏အသင်းဝင်ဖြစ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အားသာချက်ကိုများစွာအကျိုးပြုသည်။ Alietc တွင်သင်သည်နာမည်ကြီးသောကုမ္ပဏီများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်မလိုပါ။
အဝတ်အထည်မှကြွေထည်ပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများ၊ ဘောလုံးများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအားလုံး၊ သင်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆိုထုတ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ကတော့ကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်မှန်။ လိုလိုလားလားရှိပြီးတတ်နိုင်သော ၀ ယ်သူများကိုလက်လှမ်းမီခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမှာယူရန်ထုတ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ စတော့ဈေးကွက်ကိုရောင်းချရန်ဖြစ်စေစတော့ရှယ်ယာများထုတ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ Alietc သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားအကျဉ်းချုံးရှာဖွေခြင်းသည် ၀ ယ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအားထုတ်လုပ်သူများ၊ အထူးသဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကတိသစ္စာပြုမှုကိုသက်သေပြပါလိမ့်မည်။
ယင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အောင်မြင်နိုင်သနည်း။ သော့ချက်စာလုံးများကိုအလွန်ထိရောက်သော SEO (search engine optimization) နည်းများဖြင့်ပစ်မှတ်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်သူများအားသင်၏တည်ရှိမှုနှင့်သင်ကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုမိစေရန်သေချာသည်။
အရေးကြီးသည်မှာသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သူနှင့်မည်သူ့ထံရောင်းချသည်၊ မည်သည့်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်များသည်တစ်ညလုံးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ စျေးကွက်အပြောင်းအလဲများသို့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ရန်စွမ်းရည်နှင့်ကိရိယာများရှိခြင်းသည်သင်လိုအပ်သောရလဒ်များ၊ အချိန်နှင့်အကြိမ်ထပ်မံရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်လုပ်နိုင်သမျှလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ထားသောသင်၏ထုတ်ကုန်များကိုစတင်ရောင်းချနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ Alietc ၏လှပမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအရာအားလုံးကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာလုပ်လိုသောကြောင့်သင်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်နှစ်ခုလုံးကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
One B2B DIGITAL Marketplace၊ ဘာသာစကား ၁၀၅ မျိုး
စဉ်ဆက်မပြတ်နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောအားသာချက်များသည် ALIETC ကိုတရုတ်၊ ဂျာမန်၊ အာရဗီနှင့်ပြင်သစ်တို့အပါအဝင်ဘာသာစကား ၁၀၅ ခုပါသောကွန်ရက်စာမျက်နှာ ၁၀၅ ခုမှတဆင့်လည်ပတ်နိုင်စေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုတင်လိုက်သည်နှင့်၎င်း၏ဖော်ပြချက်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက် ၁၀၅ ခုတွင်ကွဲပြားသောဘာသာစကား ၁၀၅ ခုသို့အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်လိမ့်မည်။
Alietc - အွန်လိုင်းစျေးကွက်ထက်အများကြီးပိုပါတယ်